प्रदेश २ मा सरकार परिवर्तनको संकेत ! - News Birat
प्रदेश २ मा सरकार परिवर्तनको संकेत !
जनकपुर, माघ १८प्रदेश सरकारका एक राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको दुई दिनपछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यसबारे टिप्पणी गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डा. डिम्पल झाले मंगलबार राजीनामा दिनुको कारण उनकै पार्टी रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताएका छन् ।
राज्यमन्त्रीको राजीनामाबारे शनिबार पत्रकारहरूको जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री राउतले सरकारका कारण नभइ झाले आफ्नै पार्टीका कारण राजीनामा गरेको बताएका हुन् । राजपाका कोटाबाट राज्यमन्त्री बनेकी झाले आफू सरकारको कामदेखि सन्तुष्ट नरहेकाले राजीनामा दिएको बताएकी थिइन् ।
धेरै दिनदेखि उपभोक्ता समितिहरूको पैसा फर्छ्यौटमा मुख्यमन्त्रीले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै डा. झा असन्तुष्ट थिइन् । ’हाम्रो पैसा किन रोकियो भनेर मानिसहरू हामीलाई फोन गर्छन्, क्याविनेटबाट पास भए पनि अहिलेसम्म पैसा दिइएको छैन’, उनले राजिनामा दिएपछि पत्रकारहरूसँग भनेकी थिइन् ।
शनिबार, १८ माघ २०७६, १६:२५ February 1, 2020 मा प्रकाशित